Genius Chidzikwe Net Worth 2018: What is this tennis player worth?
Home » Sports » tennis » Genius Chidzikwe Net Worth 2018: What is this tennis player worth?
Genius Chidzikwe is a tennis player who was born on August 3, 1979. This article will take a look at Genius Chidzikwe’s net worth.
Genius Chidzikwe Career, Earnings
Genius Chidzikwe’s professional career began in 1996. Chidzikwe plays Right-handed.
Over an accomplished career, Chidzikwe won a total of 0 singles titles, won a total of 0 doubles titles and earned a total of $15,748 from competition. Chidzikwe has won 0 singles titles, with a record of 3-15 and reached a rank of 389 (August 2, 2004). Chidzikwe has won 0 doubles titles, with a record of 1-3 and reached a rank of 380 (April 7, 2003) in doubles play.
Genius Chidzikwe Net Worth 2018
So what is Genius Chidzikwe’s net worth in 2018? Chidzikwe earned a total of $15,748 from competition according to Wikipedia, but that’s not all of Chidzikwe’s earnings, which may include sponsorships, businesses, and promotions. Our estimate for Genius Chidzikwe’s net worth in 2018 is:
Looking for other related tennis players? Check out the net worth numbers for Bertrand Madsen, Joakim Nyström, Renzo Olivo, Kevin Krawietz, Julio César Campozano, Felipe Ríos, Yang Zhaoxuan, Jack May, Ernest Browne, Nathalie Tauziat, and Andreja Klepač.